Daniel Assai: Xisbigu lacag ayuu ku qaatay urur haween oo aan jirin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wargeyska Aftonbladet: ”Xisbiga SD oo malaayiin lacag deeq ah khayaamay”
Daniel Assai: Xisbigu lacag ayuu ku qaatay urur haween oo aan jirin
La daabacay tisdag 28 januari 2014 kl 09.41
Wargeyska Aftonbladet ayaa maanta shaaca ka qaadey in xisbiga Sverigedemokraterna been-abuuray urur haween oo aan jirin si uu khayaamo malaayiin karoon oo ka mid deeqda dowladdu siiso ururada siyaasadda. Sidaasna waxaa wargeyska Aftonbladet u sheegay guddoomiyihi hore ee golaha dhexe ee xisbiga Daniel Assai.
Wargeyska Aftonbladet ayaa helay dokumeenti iyo e-mail muujinaaya sida xisbigu ugu dadaalay in uu wax walba sameeyo si uu helo lacagtaas deeqda ah.
– Waxaan dejinney istaraajiyada aad loo soo lafaguray. Jimmie Åkesson qudhiisa ayaana saxiixay warqaddii lagu codsanaayey lacagtaas, ayuu yiri Daniel Assai.
Kolkii ay taariikhdu ahayd 13kii oktoober 2010 oo ahayd hal bil kadib markii xisbigu guusha ballaaran ka gaarey doorashadii baarlamaanka ayaa shir qarsoodi ah lagu qabtay xafiiska cusub ee Jimmie Åkesson looga diyaariyey aqalka baarlamaanka. Hoggaamiyaha xisbiga ka sokow, waxaa kulankaas ka qaybqaatay madaxii arrimaha dhaqaalaha xisbiga u qaabbilsanaa xilligaas Per Björklund iyo guddoomihii golaha dhexe markaas loo doortay Daniel Assai.
Kulankaas degdegga ah ayaa gol lahaa in lagu dejiyo istaraajiyadi uu xisbigu gacanta ugu dhigi lahaa lacagtaas oo ahayd mid hal milyan kor u dhaaftay, ahaydna canshuurta bulshadu bixiso. Si uu lacagtaas u helo wuxuu xisbigu guddiga baarlamaanka u qaabbilsan deeqda xisbiyada u soo gudbiyey in uu deeq u doonayo urur haween ee xisbiga. Lacagtaasina gebi ahaan waxay dhammeyd 1418050 milyan oo karoon.
Balse dhibaatadu waxay ahayd in uusan xilligaas xisbigu lahayn urur haween.
– Dhaqaalaha xisbiga ayaa doorashada ahaa mid dhulka galay. Halkaasna waxaa ka aragnay hab aan lacag dheeraad dhaqso ugu heli karno. Sidaasna waxaa hadalkiisa ku daray Daniel Assai, oo hadda ka tegey dhammaan hawlihii uu ka hayey xisbiga SD.